नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): राजधानीमा दिनप्रतिदिन असुरक्षा बढिरहेका बेला पाकिस्तानी दुतावासका एक कर्मचारीमाथि गोली प्रहार !
राजधानीमा दिनप्रतिदिन असुरक्षा बढिरहेका बेला पाकिस्तानी दुतावासका एक कर्मचारीमाथि गोली प्रहार !
राजधानीमा दिनप्रतिदिन असुरक्षा बढिरहेका बेला पाकिस्तानी दुतावासका एक कर्मचारीमाथि गोली प्रहार गरेको छ। दुतावासमा कार्यरत मोहम्मद आशिषमाथि बसुन्धरा पुलमा बन्दुकधारीहरुले ४ गोली प्रहार गरेका थिए। गोली लागी गभीर घाईते भएका आशिषको अहिले टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार भईरहेको छ। बिहान ९ बजे बसुन्धरामा हिँडिरहेको बेला गोली प्रहार भएको प्रहरीको भनाइ छ।
lachhin April 14, 2011 at 10:34 AM
hoina sarbasadharan ra nirdosh harulai matra goli,khukri thokne kasta manab hun?yo chaine chor gunda haru hoinan,pakkai pani sade galeka vrasta chor neta haruko kam hunu parchha.desh ta bigare bigare aba janata pani sidaune bhaye.